အရည်, အီလက်ထရောနစ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းနည်း, သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်များအတွက်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်းပျော်စေ
Home > ထုတ်ကုန်များ > Hydrofluoroether သန့်ရှင်းရေးကိုယျစားလှယျ > အီလက်ထရောနစ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက်
အီလက်ထရောနစ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, အရည်ပျော်စေ, အီလက်ထရောနစ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက်သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် distilling ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်အသုံးပြု  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက်အနိမ့်မျက်နှာပြင်-တင်းမာမှုဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် HFE အထီးကျန်သန့်စင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် insulator တွင်လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက်သန့်ရှင်းရေး Hexafluoropropyl မီသိုင်းအီ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေသန့်ရှင်းရေးအရည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် HFE Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက်မဟုတ်သောအဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ကင်းသန့်ရှင်းရေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက်သန့်ရှင်းရေး HFE ကောင်းမွန်သောလျော့ပြေ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် HFE အရောင်အရည်သန့်ရှင်းရေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အနိမ့်မျက်နှာပြင်-တင်းမာမှုနှင့်ထဲမှာပါတဲ့ဆပ်ပြာဆားကစ်ဘုတ် အဆိုပါ Professional ကသန့်ရှင်းရေး Solutions ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: 1.non အဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ကင်းမဟုတ်သော - ကိုစိတျဆိုး; 2.HFE အလွန့်အလွန်နိမ့်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုနှင့်ထဲမှာပါတဲ့, အီလက်ထရောနစ်...
ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက်အနိမ့်မျက်နှာပြင်-တင်းမာမှုနှင့်ထဲမှာပါတဲ့ဆပ်ပြာ HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်ရှိပါတယ်, ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။...
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် HFE အထီးကျန်သန့်စင် အဆိုပါ Hydrofluoroether အစွမ်းမဲ့သန့်ရှင်းရေးကိုယျစားလှယျမြား၏ဝိသေသလက္ခဏာများ:0င်များ၏အရည် Environmental ဖော်ရွေ, ODP တန်ဖိုးကိုရှိသည်နှင့်အလွန်နိမ့် GWP တန်ဖိုးကိုသန့်ရှင်းရေး 1. HFE...
ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် insulator တွင်လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆပ်ပြာ စက်မှုအင်္ကျီ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: 1. Hydrofluoroether ကောင်းမွန်သောလျော့ပြေ, ကျန်ကြွင်းမပါဘဲလွယ်ကူသောမတည်ငြိမ်မှုများနှင့်ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ကုသမှုတွင်ကောင်းသောအမှုကိုအခန်းကဏ္ဍကစားနိုင်ပါတယ်; 2....
ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက်သန့်ရှင်းရေး Hexafluoropropyl မီသိုင်းအီ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာအရောင်မဲ့,, poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အထီးကျန်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်-friendly ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ Hydrofluoroether...
ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေသန့်ရှင်းရေးအရည် အဆိုပါသန့်ရှင်းရေး Solutions ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: သန့်ရှင်းရေးပြီးနောက် 1.The အရည်, အရှင်, ရေသန့်အားဖြင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် လျှော့ချ ဆုံးရှုံးမှု , ကုန်ကျစရိတ်သိမ်းဆည်းပါ။ 2.HFE...
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် HFE Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ Hydrofluoroether ထုပ်ပိုး, သိုလှောင်မှုနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသည်ဤသည်အင်္ကျီကို 25kg / စည်နှင့်အတူထုပ်ပိုး, ဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည်စိတ်ကြိုက်အဘို့,...
ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက်မဟုတ်သောအဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ကင်းသန့်ရှင်းရေး အဆိုပါသန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်ကိုအသုံးပြုခြင်း ဒီထုတ်ကုန် Hydrofluoroether တစ်ဦးဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရောင်မဲ့,, နှစ်ဦးစလုံးနှစ်ဦးစလုံးတည်းဟူသောတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်-friendly ထုတ်ကုန်...
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက်သန့်ရှင်းရေး HFE ကောင်းမွန်သောလျော့ပြေ အီလက်ထရောနစ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် ဒီထုတ်ကုန် Hydrofluoroether တစ်ဦးဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ အီလက်ထရောနစ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့သည်ဖြေရှင်းချက်ပျော်စေအရောင်မဲ့,,...
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် HFE အရောင်အရည်သန့်ရှင်းရေး အဆိုပါသန့်ရှင်းရေးဆပ်ပြာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: 1.HFE အလွန့်အလွန်နိမ့်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုနှင့်ထဲမှာပါတဲ့ကကောင်းစွာနိုင်ပါတယ် ပျံ့နှံ့ ထွက်...
တရုတ်နိုင်ငံ အီလက်ထရောနစ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် ပေးသွင်း
Hydrofluoroether သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်အရောင်, အနံ့, Non-အဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ကင်း insulator တွင်လည်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေထုတ်ကုန်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့ dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်အလွန်နိမ့်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှု, အနိမ့်ထဲမှာပါတဲ့, မတည်ငြိမ်သောနှင့်မျှမကြွင်းသောနှင့်တည်ငြိမ် hydrofluoroether နှင့်အတူအာဂွန်သန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာစံပြဖလပ်, စိုစွတ်သောသန့်ရှင်းရေးနှင့်အဝတ်လျှော်အောင်မြင်ရန်ဖို့လူစုခွဲအလွှာများနှင့်အမျိုးမျိုးသောအပေါက်၏မျက်နှာပြင်ဖြန့ ်. , ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောရေငွေ့ပျံသံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်သောသင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်ရှိပါတယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုတိကျစွာအလွှာ၏သန့်ရှင်းရေးအတွက်အသုံးများဖြစ်ပါတယ်။
အရည်ပျော်စေ အီလက်ထရောနစ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် အီလက်ထရောနစ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် အရည်အပေါ်အေး